ဂျော့ဘ်စိုက်ပျိုးရေး | USAHello | USAHello
تعرف على الزراعة وأنواع مختلفة من الوظائف الزراعية. اقرأ عن المسارات المهنية المختلفة التي يمكنك اتخاذها في الزراعة. သင်လိုအပ်သင်တန်းနှင့်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အရှာဖွေနေစတင်ရန်ရာအရပျနဲ့ပတျသကျတဲ့အထဲက Find.
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုငါးနှင့်တောရိုင်း of Service ကိုပုံ၏တစ်ဦးမိတ္တူ
စိုက်ပျိုးရေးအလုပ်အကိုင်များစိုက်ပျိုးရေးအလုပ်အမျိုးအစားအားလုံးကိုပါဝင်သည်. လယ်ယာကောက်ပဲသီးနှံနှင့်လုပ်သားများပျိုးထောင်တိရိစ္ဆာန်များနှင့်လယ်ယာထုတ်ကုန်ပြုစုပျိုးထောင်နေကြအစားအစာမှလှည့်နေကြပါတယ်. အမေရိကန်စိုက်ပျိုးရေးရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်သူအပေါ်မှီခိုဖြစ်ပါသည်. ဒါဟာနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံရဲ့အစားအသောက်အားလုံး၏ထုတ်လုပ်မှုအတွက်ဒုက္ခသည်များနှင့်ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားကူညီပေးသည်.
ဒီတစ်ခါလည်းသင်စိုက်ပျိုးရေးလယ်ပြင်၌တစ်ဦးနောက်ခံရှိသည်နှင့်သင်တစ်ဦးလယ်ယာအလုပ်လုပ်ချင်. ဒီတစ်ခါလည်းသင်စိုက်ပျိုးရေးများ၏အလုပ်အကိုင်အတွက်လေ့ကျင့်ရေးချင်တယ်. စိုက်ပျိုးရေးအလုပ်အကိုင်များ၏ကွဲပြားခြားနားသောအမျိုးအစားများအကြောင်းကို Read နှင့်မည်သို့စတင်ရန်.
အသေးစားခြံ – ဒါဟာအော်ဂဲနစ်အစားအစာများသို့မဟုတ်အထူးပြုအများအပြားအသေးစားခြံထုတ်လုပ်. အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၌မိမိတို့ကိုယ်ပိုင်လယ်ယာအတွက်စတင်အလုပ်နှင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေအများကြီးလိုအပ်ပါတယ်.
Farmhand – အကျင့်နှင့်တိရိစ္ဆာန်များသို့မဟုတ်ကောက်ပဲသီးနှံများနှင့်အတူကြီးမားသောခြံပေါ်လယ်ယာလုပ်သားများ.
အသားထုပ်ပိုးစက် – စက်ရုံတစ်ရုံကဲ့သို့ပတ်ဝန်းကျင်တွင်တိရိစ္ဆာန်များနှင့်အသားထုပ်ပိုးများကိုလုပ်ကြံရာပေါ်မှာအလုပ်လုပ်နေ. ကျန်းမာရေးအာမခံနှင့်အခြားစိုက်ပျိုးရေးအလုပ်အကိုင်ပေး. အတော်များများကဒုက္ခသည်များအသားအပင်စည်းရုံးဖို့အသုံးပြုကြသည်.
ရာသီအလိုက်အလုပ်သမား – စပါးရိတ်ရာကာလသီးနှံရာသီ Alzraah.ihsdon အပင်ပေါင်းပင်, ရေ, ထုပ်ပိုးခြင်းနှင့်တင်ပြီးနောက်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတစ်ဝှမ်းကဒီသီးနှံရာသီခရီးသွားရာသီအလိုက်လုပ်သားများမကြာခဏရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်သူ. အဆိုပါရာသီအလိုက်လုပ်သားများအများစုဟာ (ဒါဟာတရားဝင်ဘောင်းဖြစ်ပါသည်) နှင့်အလုပ်လုပ်အခြေအနေများဆိုးရွား.
အတွင်းစိတ်မြို့တော်စီမံကိန်း – အများအပြားစေတနာ့ဝန်ထမ်းအခွင့်အလမ်းများနှင့်မြို့မွေးမြူရေးခြံနှင့်ရပ်ရွာဥယျာဉ်၌အချို့ပေးဆောင်ရာထူးရှိပါတယ်.
စိုက်ပျိုးရေးစက်ပစ္စည်းအော်ပရေတာ – ပိုပြီးသင်တန်းနှင့်အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်ဖို့လယ်ယာအတွက်လိုအပ်ကြီးမားသောပစ္စည်းကိရိယာများအော်ပရေတာ, ဒါပေမယ့်သူတို့ကမလိုအပ်မကြာခဏပိုကောင်းသည်အခြားလယ်ယာလုပ်သားများထက်သူတို့ကိုပေးဆောင်.
အစိုးရစစ်ဆေးရေး – စစ်ဆေးရေးမှူးအစားအစာကောက်ပဲသီးနှံနှင့်တိရစ္ဆာန်တွေကိုစနစ်တကျကြီးပြင်းခြင်းနှင့်ကျန်းမာရေး, ဘေးကင်းလုံခြုံမှုနှင့်ပတ်ဝန်းကျင်၏စည်းမျဉ်းများအတိုင်းလိုက်နာဖြစ်ကြောင်းသေချာ agronomists အောင်.
လယ်ယာမန်နေဂျာသို့မဟုတ်လယ်ယာကြီးကြပ်ရေးမှူး – စိုက်ပျိုးရေးလုပ်သားများမန်နေဂျာ, လယ်ယာလုပ်သားများမှလယ်ယာကနေခရီးသွားလာသူကိုအထူးသဖြင့်ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားများကြီးကြပ်.
စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ – စိုက်ပျိုးရေးကဏ္ဍ၏စီးပွားရေးဘက်၏လုပ်ငန်းဆောင်တာရောင်းအားနှင့်အခြားထောက်ပံ့စက်မှုလုပ်ငန်းများအပါအဝင်ပါဝင်သည်. ဤရွေ့ကားလုပ်ငန်းဆောင်တာကိုပိုပြီးစီမံခန့်ခွဲမှုရာထူးပေး.
သိပ္ပံပညာရှင်များ – စိုက်ပျိုးရေးသိပ္ပံမြေဆီလွှာသိပ္ပံနှင့်စက်ရုံမျိုးရိုးဗီဇပါဝင်သည်.
စိုက်ပျိုးရေးတစ်ခက်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအလုပ်ဖြစ်ပါသည်. ဒါဟာအင်အားကြီးတိရိစ္ဆာန်များနှင့်အတူအလုပ်လုပ်သောသူလယ်ယာလုပ်သားများနှင့်လူဖြစ်ရရှိရမည်. အတော်များများကစိုက်ပျိုးရေးအလုပ်အကိုင်များလည်းအသုံးပြုသောစက်ဖြစ်ကြောင်း, ဒါကြောင့်စက်နှင့်အတူကောင်းစွာအလုပ်လုပ်တယ်သူတစ်ဦးအဘို့အကောင်းတစ်ဦးအလုပ်ဖြစ်ပါသည်. သငျသညျ, ပြည်ပမှာစိုက်ပျိုးရေးဝတ်စုံကို၏လုပ်ငန်းဆောင်တာအလုပ်မလုပ်လိုလျှင်. သို့သော်အန္တရာယ်မှာလယ်ယာမြေပေါ်တွင်အလုပ်လုပ်, သင်သည်စက်တွေ, ဓာတုပစ္စည်းများနှင့်တိရိစ္ဆာန်တွေအကြောင်းသတိထားရပါမည်. သင်သည်သင်၏တာဝန်ဝတ္တရားမတတ်နိုင်နိုင်ကြသည်လျှင်, လယ်ယာမန်နေဂျာသို့မဟုတ်ကြီးကြပ်ရေးမှူးသင်သင့်လျော်သောဖြစ်စေခြင်းငှါကတည်းက. ဘာသာစကားနှစ်ခုအားဆင့်ဆိုရမည်မှာလယ်ယာလုပ်သားတွေရဲ့ညွှန်ကြားရေးမှူးတစ်ဦးအကြီးအချိန်ခွင်လျှာဖြစ်ပါသည်.
ငါအဘယ်မှာရှိ start သလဲ?
စိုက်ပျိုးရေးအလုပ်အကိုင်များကယ်လီဖိုးနီးယားတက္ကဆက်ပြည်နယ်အတွင်းရှိစီးပွားရေးကြီးမားတဲ့အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုနှင့်နှစ်လယ်ပိုင်းတွင်အနောက်ဘက်နှင့်တောင်ဘက်တွင်အချို့သောပြည်နယ်များဖြစ်ကြသည်. နို့ထွက်ပစ္စည်းနဲ့အသီးစက်မှုလုပ်ငန်းများ, ဟင်းသီးဟင်းရွက်နှင့်အသားအမြဲလယ်ယာလုပ်သားများရန်လိုအပ်ပါတယ်. သူတို့ကအများအားဖြင့်ကျွမ်းကျင်မှုသို့မဟုတ်အလယ်တန်းပညာရေးတောင်းဆိုပါဘူး. အဆိုပါလယ်သမားသို့မဟုတ်လယ်ယာမန်နေဂျာ Ptdrebk ပါလိမ့်မယ်. သို့သော်ဤအလုပ်အကိုင်များကောင်းတစ်ဦးလစာမဟုတ်. အမေရိကန်စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာနအဆိုအရပိုပြီးအားလုံးလယ်ယာလုပ်သားများ၏ထက်ဝက်ထက်မဆိုအထောက်အထားမဲ့သူတို့ဥပဒေရေးရာစာတမ်းများရှိသည်မဟုတ်ကြဘူး.
တခြားစိုက်ပျိုးရေးအသက်မွေးဝမ်းပညာရေးနှငျ့အခြို့လေ့ကျင့်ရေးလိုအပ်နိုင်ပါသည်. ထိုကဲ့သို့သောစိုက်ပျိုးရေးစစ်ဆေးရေးအဖြစ်အစိုးရအလုပ်အကိုင်များကိုတောင်း အမေရိကန်နိုင်ငံသား Get အွန်လိုင်းအမေရိကန်နိုင်ငံသားစာမေးပွဲအခမဲ့သင်ခန်းစာ
စိုက်ပျိုးရေးအတွက်လယ်ယာသင်ခန်းစာတွေအများကြီးနှင့်အတူဒေသများရှိရပ်ရွာကောလိပ်များ. နှစ်နှစ်တွဲဖက်ဒီဂရီကမ်းလှမ်းဘယ်ဟာ. သင်တစ်ဦးကိုတိရစ္ဆာန်သိပ္ပံတွဲဖက်ဒီဂရီ, စိုက်ပျိုးရေးသိပ္ပံသို့မဟုတ်ဇီဝဗေဒရနိုင်. စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းအလုပ်မလုပ်, သို့မဟုတ်သင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုစတင်ချင်လျှင်, အသင်တို့သည်လည်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်မှုလိုအပ်. အသိုင်းအဝိုင်းကောလိပ်များအများအပြားစီးပွားဖြစ်သင်တန်းများရှိပါသည်. သငျသညျအနီးအသိုင်းအဝိုင်းကောလိပ်ရှာရန်
ကော်နဲလ်တက္ကသိုလ်ကအသေးစားခြံအစီအစဉ်မှအွန်လိုင်းသင်တန်းများ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုစိုက်ပျိုးရေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးနှင့်ကျန်းမာရေးစင်တာများများ၏ဘေးကင်းလုံခြုံမှုမှဗီဒီယိုကလစ်ပ် Watch
အတော်များများကဒုက္ခသည်များနှင့်ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်သူစိုက်ပျိုးရေးများ၏အသိပညာနှင့်အတူအမေရိကမှလာ. အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတစ်လျှောက်လုံးကိုသင်ထောက်ပံ့သောအစီအစဉ်များသို့မဟုတ်မီးရထားရှာတှေ့နိုငျသို့မဟုတ်ဒုက္ခသည်များမှလယ်သမား employ. ဤတွင်သူတို့ထဲကအချို့:
ဟာဝိုင်ယီ: စိုက်ပျိုးရေး Konya Incubator
မိန်း: နယူးအမေရိကန်ရေရှည်တည်တံ့သောစိုက်ပျိုးရေးစီမံကိန်း (NASAP)
နယူးယောက်: ဒုက္ခသည်များဆိုင်ရာ Cyrkios စိုက်ပျိုးရေးမိတ်ဖက်
မစ်ဆူရီ: ကမ္တာ့လယ်တွေများအတွက် International Institute
Tennessee ပြည်နယ်: အတူတကွတိုးတက်ကြီးပွားခြင်း
တက္ကဆက်ပြည်နယ်: ရှေ့ဆက် implants
ဖြစ် သငျသညျ GED ရန်လိုအပ်ပါတယ်?
استخدم مراكز التوظيف: အစိုးရအလုပ်အကိုင်စင်တာများအခမဲ့. အကွံဉာဏျပေးနှင့်ဒေသခံအလုပ်အကိုင်များများစာရင်းကိုစောင့်ရှောက်. သူတို့ကအလုပ်၏ CVs နှင့်ပုံစံများကိုကူညီပေးနေကြပါသည်. လေ့ကျင့်ရေးအလုပ်မလုပ်နှင့်ပညာရေးရန်သင့်အားယူနိုင်ပါသည်. သငျသညျကနေအနီးဆုံးအလုပ်အကိုင် Center ကရှာဖွေပါ
အွန်လိုင်းရှာရန်: Aghres ဒါဟာစိုက်ပျိုးရေးအလုပ်အကိုင်များ၏စုဆောင်းမှုတို့အတွက်ဆိုက်ဖြစ်ပါသည်
မောရစ် Ajabulo, နယူးကောက်ပဲသီးနှံလယ်ယာဂျာစီအတွက်ကမ္ဘာ့ဖလားကုမ္ပဏီ၏ပိုင်ရှင်နှင့်အတူအင်တာဗျူး
တွင် 2002 , Maurice Gpoulo လိုင်ဘေးရီးယားကနေဒုက္ခသည်တွေအဖြစ်တောင်ပိုင်းနယူးဂျာစီသို့ပြောင်းရွှေ့. ယနေ့သူကိုခစျြသောအရာကိုလုပ်နေတယ် – သူ၏ဇာတိကနေဘိန်းစိုက်ပျိုးမှုရှိပါတယ်အကြိုက်ဆုံးဟင်းသီးဟင်းရွက်သီးနှံများကို.